Fa maninona ny alikako no manana savoka mainty eo an-tsofiny? | Alika Manerantany
Encarni Arcoya | | curiosities, aretina, Alika ankapobeny
Matetika ny olana sy ny aretina amin'ny sofin'ny biby fiompintsika. Ny ankamaroan'ny fotoana dia vokatry ny tsy fahampian'ny fahadiovana na amin'ny fanadiovana maloto ny sofin'ny alikanay fotsiny. Ireo olana amin'ny sofina ireo dia fahita matetika amin'ny alika misy sofina lava sy lava.
Tokony hodinihina akaiky ny fanangonana savoka mainty ao an-tsofina satria io no mety hialoha lalana amin'ny aretina na aretina. Ny savoka mainty dia mety vokatry ny antony maro samihafa, manomboka amin'ny fahadiovana tsy madio sy ny loto mihangona ka hatramin'ny infectation na mite infestation amin'ny sofina.
1 Mahatonga ny alikako hanana savoka mainty eo an-tsofiny
1.1 Savoka mainty avy amin'ny otitis
1.2 Savoka mainty an'ny mites
2 Fambara famantarana tokony hotandremana
3 Torohevitra amin'ny fanadiovana ny sofin'ny alikao
4 Tsikelikely hanadio ny sofin'ilay alika
4.1 Dingana 1: amboary ny alikanao
4.2 Dingana 1: fanadiovana voalohany
4.3 Dingana 2: diovy indray
4.4 Dingana 3: ampiasao mpanadio sofina
4.5 Dingana fanampiny
5 Fanafody an-trano hanesorana savoka mainty
6 Tsy avelan'ny alikako hadio ny sofiny, inona no hatao?
Mahatonga ny alikako hanana savoka mainty eo an-tsofiny
Betsaka ny antony hisehoan'io, ary anisan'ny matetika resahina eto:
Una habetsahan'ny loto sy vovoka be dia be ankoatry ny zavatra hafa angoniny avy amin'ny tontolo iainana, izay miraikitra amin'ny rindrin'ny lakandranon'ny sofina.
Una aretina izay mety ateraky ny fanangonan-drano ao anaty sofina amin'ny fotoana fandroana, noho ny fisian'ny vatana hafa na ny tsy fisian'ny fepetra momba ny fahadiovana.
Mijaly ny biby a aretina mite sofina, izay miteraka fahasosorana, mangidihidy, marokoroko, fanaintainana ary aretina.
Ireo singa rehetra ireo dia miteraka fisehoan'ny savoka mainty, miaraka amin'ireo soritr'aretina hafa toy ireo izay efa nofaritantsika teo aloha.
Savoka mainty avy amin'ny otitis
Ny wax dia vokarin'ny alika voajanahary ho toy ny rafitra fiarovana ho an'ity taova manan-danja sy mora tohina toy ny sofina. Na izany aza, rehefa mivadika loko mainty ity savoka ity, dia iray amin'ireo antony matetika mahatonga azy io satria manana otitis ny alika.
Ity savoka miloko maizina ity matetika dia miaraka amina fofona ratsy, fitarainana amin'ny fanaintainana amin'ny faritra mifanila aminy sy ny fivontosana, ho fanampin'ny supuration. Ny savoka mainty dia azo esorina tsikelikely amin'ny fanadiovana ny lakandrenin'ny sofina, izay tsy maintsy atao am-pitandremana sy malefaka tsara, mba tsy hampivadi-po ny biby fiompinao ny traikefa.
Na izany aza, rehefa vokatry ny otrikaretina na otitis dia ilaina ny hamerenan'ny mpitsabo biby azy ny fitsaboana sahaza azy, arakaraka ny ambaratongan'ny aretina, ny toetran'ny alika, ny lanja sns.
Savoka mainty an'ny mites
ny koroka dia olana iray hafa mety hitrangan'ny alika amin'ny savoka mainty. Izy ireo dia zavamiaina bitika izay amin'ny hoditra sy ny alika indrindra, ary raha tsy tratra ara-potoana izy ireo, afaka mahatonga anao hanana aretina, ny sasany amin'izy ireo dia matotra tokoa.
Ny mite dia "bibikely" latsaka ny milimetatra kely ny habeny. Ny ràn'ilay biby no tena fihinany, fa ny sisa tavela amin'ny hoditra ao amin'ilay faritra onenany. Noho izany, mahatsapa mangidihidy sy fanaintainana be ny alika. Saingy, rehefa mipetraka eo an-tsofina ireo, dia mety hahasosotra kokoa.
Raha ny tena manokana, ireo kongana izay manandoka ao an-tsofina dia antsoina hoe Otodectes cynotis, izay fantatra amin'ny anarana hoe pirinty sofina. Tena mahazatra azy ireo amin'ny alika sy saka, ankoatry ny fanekena mora. Ary tena mifindra izy ireo.
Anisan'ireo soritr'aretina aterak'izy ireo ny alika alika matetika amin'ny lohany, toy ny hoe milanja mihoatra ny iray hafa ny andaniny. Matetika, ny sofina, izay atsangana, dia hiseho mivalona ihany koa, na hatsipy any aoriana. Fambara iray hafa an'ny kongana sofina dia fisehoan'io savoka mainty io eo amin'ny sofina, indraindray tsy tazana ety ivelany, fa eny rehefa somary lalindalina kokoa (ohatra raha mandray fanadiovana ny sofina ianao).
Rehefa tsy misy ny fitandremana dia anisan'ny vokadratsin'ny biby fiompinao ny fandehanan-drà anatiny (avy amin'ny sofina), ny tsimok'aretina bitika, na koa ny perforation an'ny eardrum (izay mampidi-doza tokoa satria mety hahatratra ny ati-doha).
Izany no antony anolorana hevitra anao fa, raha sendra soritr'aretina tsy fahita firy momba ny alika, dia mandeha mijery ny sofina ilay mpitsabo biby ary afaka manondro izay fitsaboana tsara indrindra, na amin'ny famonoana bibikely, miaraka amin'ny fanafody, misy shampoo acaricidal, na misy vokatra misoroka ny aretina. Ankoatry ny fanomezana torolàlana anao hisorohana ny olana.
Fambara famantarana tokony hotandremana
MENFORSAN Cleaner ho an'ny ...
Mety manomboka mahatsikaritra ny sofin'ny alikao ianao manana fofona ratsy be izy ireo. Tsarovy fa ny savoka amin'ny sofina dia misy fofona mahery, fa rehefa misy kosa ny aretina dia tsy mahafinaritra ilay fofona.
Rehefa misy savoka mainty be loatra dia azo tsikaritra ihany koa mena ary mivontsina ny sofina ny biby fiompinao. Matetika ianao dia manomboka mahatsikaritra fa mihifikifi-doha ny alika na manotra ny sofiny be loatra.
Miatrika tranga misy mite, mety misy koa pus na fery eo amin'ny sofin'ny alikao, miaraka amin'ny mangidihidy mahery sy savoka sôkôla mainty.
Misy fambara hafa koa tokony hotandremana:
Saina mena dia rehefa alika mihifikifi-doha matetika na manongotra azy amin'ny lafiny iray, iray hafa rehefa manotra ny sofiny foana izy. Mety hidika izany fa manana otitis na aretina hafa ianao.
Zahao ny toetran'ny lakandrano, raha mena midorehitra izy, mivoa, toa mirehitra na sosotra, dia satria azo antoka fa misy areti-mifindra hanatrika, noho izany ny savoka mainty ao an-tsofiny.
Rehefa ny alika tena tsy miraharaha, tsy te hifindra, hilalao na hisakafo.
Raha manana ianao fihetsika tafahoatra rehefa mikasika ny sofiny ianao na akaiky.
rehefa lavo ny fifandraisana ara-batana.
Eny any fisian'ny savoka mainty be.
Zahao ny faritra manodidina ny sofina fisian'ireo bontsibontsina mipoitra amin'ny aretina.
Manoloana ireo soritr'aretina ireo dia zava-dehibe tokoa ny fitsidihanao ny mpitsabo anao, izay hanamarina ny fitsaboana tsara indrindra harahina miaraka amin'ny biby fiompinao.
Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny fanadiovana lalina ny sofin'ny biby fiompinao dia mamaha ny olana, fa ny antibiotika dia matetika tokony hampiasaina hanasitranana tanteraka ny alikao.
Torohevitra amin'ny fanadiovana ny sofin'ny alikao
Efa hitantsika fa zava-dehibe ny fihazonana fahadiovana tsara eo amin'ny sofin'ny alika, fa ahoana kosa no hitazomana azy ireo hadio amin'ny fomba mety? Tandremo ireto torohevitra manaraka ireto:
Ny sofin'ny biby fiompinao Tokony diovina farafahakeliny indray mandeha isaky ny telo herinandro izy ireo, na izany aza, rehefa mihombo ny sofina ary lava ny volony dia tsara kokoa ny manadio azy ireo indray mandeha isan-kerinandro..
Zava-dehibe ny fanaovana azy tsy tapaka, ka zatra ny alika io ary afaka diovina tsy misy olana.
Toy izany koa, ny tontolo manodidina azy dia tsy maintsy raisina mba hampiharana fepetra momba ny fahadiovana miaraka amin'ny fahita matetika, satria mety hitranga amin'ny loto, poti-tany, tany, rivotra maro ary ireo singa hafa izay mankasitraka ny fanangonan-karena. ny maloto eo amin'ny sofin'ny sofina sy ny sofina.
Tsikelikely hanadio ny sofin'ilay alika
Ny fitazonana ny fahadiovana mety amin'ny sofin'ny alika dia hanampy amin'ny fisorohana olana, tsy amin'ny savoka mainty ihany, fa izay rehetra mifandray amin'ny sofina. Fa ny fanaovana azy sy ny fampandehanana azy dia mila ataonao farafaharatsiny indray mandeha isan-kerinandro.
Ny alika salama dia misy sofina mavokely ao anatiny, tsy misy scabs na savoka be dia be. (Tokony ho fantatrao fa ny sofina, toy ny an'ny olombelona, ​​dia mamorona savoka voajanahary, ka tsy azonao sorohina). Ary koa, tsy afaka mamofona ratsy izy. Raha sendra misy zavatra tsikaritray momba izay noresahinay dia tsara kokoa ny manatona ny mpitsabo biby mba hijerena raha mandeha tsara ny zava-drehetra na misy zavatra tsy mety.
Raha ny voalaza dia tokony ho fantatrao fa noho ny savoka noforoniny dia mahazatra ny alika ny manana sofina maloto kely, fa izay no antony ilana fandaniana fotoana hanadiovana azy ireo tsara. Vao mainka aza rehefa mipoitra eo amin'ny sofina ilay savoka mainty mampatahotra.
Ary ahoana no fanatanterahana azy? Hanome anao ny dingana hanatanterahana izany izahay. Amin'ny voalohany, fanadiovana ny sofina dia atao isan-kerinandro, fa ny alika tsirairay avy dia samy hafa ary hisy ireo mila fanadiovana mahazatra kokoa (ohatra ny alika manan-tsofina), ary ny hafa maharitra 15 andro na mihoatra nefa tsy manadio azy ireo.
Alohan'ny handehananao mankany dia manoro anao aho mba hanananao izay ilainao rehetra. Amin'ity tranga ity dia: gazy, masira na rano ary mpanadio sofina (tsy voatery).
Dingana 1: amboary ny alikanao
Mila ny alikanao ianao mba zatra manadio ny sofiny, ary noho izany dia tsy maintsy entinao any amin'ny toerana ahatsiarovany fahatoniana izy ary avelany hanodikodina ny sofiny ianao. Misy ny alika tsy zatra an'io, na mampatahotra azy ireo, ary mety ho sarotra kokoa izany, saingy ho an'ny fahasalamany izany, koa andramo ny tsy manasatra ny tenanao.
Dingana 1: fanadiovana voalohany
Miroso amin'ny fanadiovana voalohany. Mba hanaovana izany dia makà garde ary mandena azy, na amin'ny rano na amin'ny vahaolana saline. Avy eo sarony miaraka aminy ny fanondronao na ny rantsantananao kely ary ampidiro tsara amin'ny sofin'ilay alika ilay rantsan-tànana voafono.
Indraindray, mba hanomezana toky azy dia azonao atao ny manadio ny sofina aloha hahitanao fa tsy misy tsy mety. Mazava ho azy, rehefa mampiditra ny rantsan-tànanao amin'ny sofinao ianao dia manandrama maka gauze vaovao. Miezaha hanao fihetsiketsehana boribory miadana sy marefo mba hamoahana ny savoka.
Ara-dalàna ve ny savoka? Mamiratra. Savoka mainty ve? Mitandrema fa mety voan'ny otite na mites ianao. Savoka be loatra? Avy eo mety hisy olana.
Dingana 2: diovy indray
Tsy maintsy averinao ny dingana teo aloha mandra-pivoakan'ilay gauze madio. Raha hitanao fa, na dia efa nodiovina in-2-3 aza dia mbola maloto ihany, mety ho tonga ny fotoana anontaniana ny mpitsabo anao.
Dingana 3: ampiasao mpanadio sofina
Safidy iray hafa anananao, rehefa hitanao fa na manadio inona aza ianao dia mbola maloto ihany, dia ny fampiasana ilay mpanadio sofina ho an'ny alika. Ireo dia tena mora ampiasaina satria apetraka ao anaty sofina izy ireo ary omena ony na fivoahana io ranoka io.
Dia mila izany manome otra mba hahatratraran'ilay mpanadio ny sofina ary afaka manadio tsara. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, rehefa navotsotra, dia hihorohoro mandritra ny minitra vitsy ny alika. Aza adino anefa izany.
Ny antony dia izao dia tsy maintsy manadio indray ianao amin'ny gauze vaovao mba hanesorana izay mety ho vitany nesorina tao amin'ny sofina. Raha sendra hitanao fa mbola maloto be io, eny, tonga ny fotoana handehanana any amin'ny mpitsabo biby.
Misy alika izay mamolavola volo betsaka ao amin'ny faritry ny sofina. Izy io dia manana ny fiarovana ny sofina mba tsy hidiran'ny zavatra ao anatiny. Fa indraindray koa dia loharanon'ny aretina mihitsy, ka mety indraindray ny manapaka kely azy io.
Izany dia azo atao amin'ny hety, amin'ny fiheverana ny silhouette an'ny sofina ary koa tsy fanimbana ny sofina; na miaraka amina masinina, na manety ny volon'izy ireo, na ny pataloha izay amidiny ho an'ny sofina sy orona (izay kely kokoa ary tena tsara amin'ireo faritra ireo amin'ny alika).
Fanafody an-trano hanesorana savoka mainty
Raha manana savoka mainty ao an-tsofina ny biby fiompinao araka izay efa hitantsika hatreto, dia azo antoka fa izany dia vokatry ny fahadiovana tsy madio, noho izany dia tsy misy fanafody an-trano mety, ankoatry ny fanadiovana tsindraindray ao amin'io faritra io.
Ary koa, azo inoana fa voan'ny aretina ianao, toy ny otitis, izay mitaky ny sain'ny mpitsabo biby ary angamba ny fitsaboana amin'ny antibiotika, hatramin'ny marefo ny otitis ary tsy azo sitranina amin'ny fanafody ao an-trano.
Amin'ity lafiny ity, ny zavatra tsara indrindra dia izany aza manandrana manala ny savoka mainty amin'ny tenanao raha tsy mailo ny alikanaoAza adino, satria mahatsapa tsy mahazo aina na mangirifiry ianao, dia azo inoana fa hanana fihetsika fiarovan-tena tsy ilaina. Ny zava-dehibe dia rehefa mianatra mamantatra ny tomponao ianao rehefa tsy mahazatra ny raharaha.
Tsy avelan'ny alikako hadio ny sofiny, inona no hatao?
Satria alika ny alikanao, tsy maintsy ampianarinao matetika ny fanaony amin'ny fidiovana, eo amin'izy ireo ny fanadiovana ny sofina ka mahatonga azy io amin'ny fomba voajanahary, ary amin'izany dia manakana ny fipoiran'ny holatra ary mihombo ny aretina sy ny areti-mifindra.
Rehefa tsy zatra an'io izy dia mandà tsotra izao ny hikasihina azy, ary miteraka valin-tsaina sy fanosihosena mihitsy aza. Azonao atao ny manandrana mifandray amin'ny sofiny amin'ny fomba faran'izay madiodio, izany dia tsy miteraka tsy fahazoana aina na fanaintainana.
Raha olon-dehibe ianao ary tsy zatra izany aza atao amin'ny fomba madiodio ny fanadiovanaRehefa avelanao hilamina izy ary avelao hotazomina izy dia ampiasao ny fanamafisana tsara, mba hampifalianao azy ary hianaranao fa tsy zavatra ratsy izany.
Rehefa manadio ao anaty sofina ianao, manao hetsika amin'ny endrika tena malemy fanorana. Manotra ny faritra ivelany amin'ny sofina ary manolora fitsaboana satria avela hirotsaka amin'ity faritra ity ny fikolokoloana.
Amin'ny farany safidy, mankanesa any amin'ny dokotera raha mila torohevitra momba ny fomba tsara indrindra hahatonga ny alikanao hamela ny sofiny hadio.
Ny savoka mainty noho izany dia iray amin'ireo famantarana fa misy zavatra tsy mety ao an-tsofin'ny biby fiompinao, noho izany dia tsara ny mitandrina hatrany ary manoloana an'io soritr'aretina sy hafa io, aza mamela fotoana be loatra hitondrana azy io amin'ny consultation, SATRIA raha miharatsy ny aretina dia hihamafy ny fepetra fanasitranana Ary izany nefa tsy manisa ireo fahasosorana ateraky ny alikao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » curiosities » Wax mainty amin'ny sofin'ny alikao
Hector N. Oxilia dia hoy izy:
Salama. Nahaliana ahy tokoa ny hevitrao momba ny famoahana savoka mainty. Ity biby fiompiko ity dia manana an'io olana io, ary ny mpitsabo dia nanome azy fivontosana sy antibiotika. Misaotra betsaka.
Valiny tamin'i Héctor N. Oxilia
Natao inona ny volombava alika?